နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များ အဖွဲ့ ဆေးခန်းကို လူတချို့ ဆန္ဒပြ
နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များ အဖွဲ့ ဆေးခန်းကို လူတချို့ ဆန္ဒပြ ဟော်လန်နိုင်ငံ အမ်စတာဒမ်မြို့ အခြေစိုက် နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များ အဖွဲ့ရဲ့ AZG ဆေးခန်း စစ်တွေမြို့ မှာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာကို မြို့ခံလူထု ၂၀ ကျော်က အဲဒီဆေးခန်းရှေ့မှာပဲ ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များ အဖွဲ့ AZG ၏ စစ်တွေမြို့ ဆေးခန်းရှေ့တွင် ဆန္ဒပြနေသူများကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က တွေ့ရစဉ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ အတွင်း ဒီဆေးခန်းကုို ယာယီ ပိတ်ထားခဲ့ပြီး စစ်တွေမြို့ အမှတ်-၁၇၊ ကမ်းနားလမ်း၊ မိဇံရပ်ကွက်မှာ ရှုခင်းသာ အမည်နဲ့ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ဆေးခန်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကိုကျော်ဇောဦးက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"ဟိုးကတည်းက အမြဲတမ်း ဘက်လိုက်ပြီးတော့ ရခိုင်တွေကို ဘာမှမကူညီဘူး။ ကူညီတယ်ဆိုရင်လည်း အပြသဘောပဲ ကူညီတယ်။ ပြီးတော့ ဘင်္ဂါလီတွေကို အဓိက ထောက်ပံ့ လှုပ်ရှားပေးနေတဲ့ AZG အဖွဲ့ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဘာမှပြောစရာ မလိုပါဘူး။ အဲဒီတော့ လူထုအနေနဲ့ သူ့အလိုလို ဒီလို ဆေးခန်းလေး တစ်ခန်း လာဖွင့်တယ်ဆိုတာ သူတို့က ဒီ HIV/AIDS ရောဂါသည်တွေကို ငါတို့ လုပ်ပေးပါတယ် ဆိုတဲ့ ဥစ္စာလေးနဲ့ သူက ခြေကုပ်ယူပြီးတော့ ဟိုကဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂါလီဘက်ကို သူတို့က အဓိက အားပေးချင်တယ်။ အဲဒီလို လုပ်ကိုလုပ်ဖို့ ဆိုပြီးတော့ ဒီက ရခိုင် Community က လူတွေက သဘောပေါက်တဲ့ အတွက် ဒါကို တားဆီးရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ တားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။"
အခုလို AZG ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်တာကို မြို့ခံလူထုက ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ဒီကနေ့ ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်မယ့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ဟော်လန်အခြေစိုက် နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့ရဲ့ AZG ဆေးခန်းတွေကို ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း HIV ဝေဒနာရှင်တွေနဲ့ ငှက်ဖျား တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေ အတွက် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တည်းက စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးခင်က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ အတွင်း ဆေးခန်းအားလုံးကို ယာယီပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ တစ်နည်းတစ်ဖုံ ဆက်နွယ်မှု ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အစိုးရက ဦးကျော်လှအောင် အပါအဝင် ဝန်ထမ်းအချို့ကို ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး များမကြာခင်က နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမ်ိန့်နဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။
AZG ကိုလက္ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိ၊ ကူညီမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှတဆင့် ပြည်နယ်အစိုးရကိုအကူအညီပေးလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ပိုပြီးရူပ်ထွေးအောင်လုပ်နေတာလဲ။ ကူညီရာမရာက်ဘဲ ပြည်သူတွေကို စိတ်ဒုက္ခပေးနေသလား။ အဝေးက ကူညီပေးလို့ရပါတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံကဘဲကူညီပေးပေး။
AZG အဝေးကကူညီပါ။ လူသားအချင်းချင်းစာနာထောက်ထားတယ်ဆိုယင်ဘာသာမရွေးလူမျိုးမရွေးကူညီပေးပါ။ PLEASE GO AWAY/ PLEASE GET OUT (AZG)
Oct 19, 2012 07:43 AM
That is right.they are not for all.and not fair,only rohinga since 1994,,so don't do like this they [azg] have bad idea and also ngos
This is too bad...doctors without border has been helped in thai border since 1990 and we got very good help from them. i do not think like what rakhine people said.
Oct 19, 2012 04:16 AM
I think that is not good what rakhine guy said. totally wrong. in border of thailand, the doctors without boder group helpalot to myanmar peoples. why rakhine people said now...why 1994. they open since 1994. its too bad....